Mwari Ari Kutirova Neshamhu Here? Njodzi Dzinongoitika Dzoga Mabasa aMwari Here?
Mwari Ari Kutirova Neshamhu Here?
Pakaitika kudengenyeka kwenyika kwaiva nesimba netsunami kuJapan muna March 2011, mumwe mukuru mukuru wezvematongerwo enyika weikoko akati: “Ndinonzwira hangu tsitsi vanhu vakawirwa nenjodzi, asi ndinofunga kuti varangwa naMwari.”
Pakaitika kudengenyeka kwenyika kuHaiti muna January 2010 kukauraya vanhu vanopfuura 220 000, mumwe mufundisi anogara achibuda paTV akati imhaka yokuti “vakaita chibvumirano nadhiyabhorosi” uye vaifanira “kutendeukira kuna Mwari.”
“Mwari ari kuda kumutsa hana dzedu dzakafa,” akadaro mupristi weRoma pakafa vanhu 79 mumhirizhonga yakaitika muManila, kuPhilippines. Pepanhau rekunyika iyi rakataura kuti “vanhu vakuru 21 pazana roga roga vanobvuma kuti Mwari ari kuregedzera hasha dzake nokuita kuti vanhu vawirwe nenjodzi dzakadai sekuondomoka kwevhu, madutu nedzimwewo njodzi” dzinogara dzichiitika munyika iyi.
VANHU vakagara vachingofunga kuti njodzi dzinongoitika dzoga ishamhu yaMwari. Muna 1755, muLisbon kuPortugal kwakaitika kudengenyeka kwenyika, moto uye tsunami, pakafa vanhu 60 000. Muzivi akakurumbira Voltaire akabvunza kuti: “Saka zvinoreva here kuti muguta reLisbon iri raparara ndimo maiitwa zvakaipa kupfuura madiro anoitwa kuParis?” Mamiriyoni evanhu ari kunetseka kuti njodzi dzinongoitika dzoga ishamhu yaMwari here? Munyika dzakawanda njodzi idzi dzinotonzi mabasa aMwari.
Tichifunga zvose izvi, tinofanira kubvunza kuti: Ichokwadi here kuti njodzi dzinongoitika dzoga ishamhu yaMwari? Njodzi dzakaipisisa dziri kugara dzichingoitika mazuva ano kurangwa naMwari here?
Vamwe vanopomera Mwari vachiti Bhaibheri rine nhoroondo dzinoratidza kuti akamboparadza vanhu achishandisa zvinhu zvaakasika. (Genesisi 7:17-22; 18:20; 19:24, 25; Numeri 16:31-35) Asi patinoongorora imwe neimwe yenhoroondo idzi tinoona kuti pane zvinhu zvitatu zvakasiyana chaizvo nenjodzi dziri kuitika mazuva ano. Chokutanga, vanhu vaitanga vanyeverwa. Chechipiri, kusiyana nenjodzi dziri kuitika mazuva ano dzinongouraya vakaipa zvose nevakanaka, kuparadza kwaMwari kune vakwainanga. Vanhu vakaipa vakanga vasingadi kupfidza kana kuti vaisada kuteerera nyevero ndivo vaiparadzwa. Chechitatu, Mwari aiita kuti vanhu vasina mhosva vapone.—Genesisi 7:1, 23; 19:15-17; Numeri 16:23-27.
Hapana uchapupu hunoratidza kuti Mwari ndiye ari kukonzera njodzi dzakaipisisa dzisingaperi dziri kuwira vanhu mazuva ano. Saka chii chiri kuita kuti njodzi idzodzo dziwedzere? Tingaitei nezvenjodzi idzi? Pachazombova here nenguva yokuti kunenge kusisina njodzi idzodzo? Uchawana mhinduro dzemibvunzo iyi munyaya dzinotevera.
Jesu akafanotaura nezvekuwedzera kwenjodzi. Izvi zvinorevei kwatiri nhasi?